Dhagayso:- Odayaasha ,Dhalinyarada & Aqoonyahanada kunool Minisoota Maraykanka oo ka hadlay Heshiiskii Gaalkcyo,M/Xasan sheekhna eedeyeey – Kismaayo24 News Agency
by Tifaftiraha K24 3rd December 2015 035
﻿​﻿​Kadib shir jaraa”id oo khadka Taleefanka oo ay qabteen odayaasha iyo waxgaradka,dhalinyarad,kunool dalka Maraykanka Gaar ahaa Minesota ayaa waxaa ay uga hadleen Heshiiskii gaalkcyo iyo dagaaladii kasii horeyey ee kadhacay Magaaladas.
Waxgaradkan iyo dhalinyarada iyo Aqoonyahanad ayaa kasoo jeeda magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobalka Mudug,waxaana ay ka hadleen qodobadii ay kala saxiixdeen C/weli gaas iyo C/kariin Guleed.
Waxay shegeen in Qodoba goobta laga akhriyeey,ama lakala saxiixday aysan waxba soo kordhinayn isla markaana shacab la barakiciyeey oo aysan jirin meelay kusoo laabtan maadama an heshiis muuqada la garin.
dhinaca kale waxay ku taliyeen in Magaladas oo labo Calan ka ruxmanayaan an lagu joogin karin Wax Nabad ah,in la isugu yimaado Calanka Qaranka ma ahee,.
Waxaa kale oo shegen in Ay lasocdaan Beesha Caalamka inay cadaadisay Madaxweyne C/weli gaas,balse waxay shegeen inaysan waxba kasoo baxayn ,iyagoo shegay in Maamulku horfaristay Gaas uu yahay mid Xaaran ah.
Madaxweynaha Dowladda Faderaalka somalia Xasan sheekh ayeey ku eedeyeen in uu kadambeyo waxa kasocda gaalkcyo,iyo waliba bilowga dagaalkii dhawaan kadhacay Gaalkcyo.
Waxay tilmaamen in magaaladu Nabad noqonayso markii uu Xasan sheekh Qirto Dambigiisa,isla markaana uu xaliyo wax walba oo jira,isla markaana uu daayo waxyabaha abuuraya dagaalka uu wado.﻿​ http://www.kismaayo24.com/wp-content/uploads/2015/12/shirka-jaraaid-ee-waxgaradka-Minesota-ee-Galkcyo.mp3
DEG DEG:- Dagaal udhaxeya Puntland iyo Gal-Mudug oo ka Qarxay Markale Gaalkcyo
Dhagayso:- Xabado oo socota iyo Khasaare Jira Dagaalka Gaalkacyo
Imaaraadka Oo Doonaya inuu Soomaaliya ka Caawiyo Arrimaha Bani’aadanimada
Ahmed sudani 25th December 2017
Falanqeyn: 57-guuradii ka soo wareegatay aas aaska ciidamada xoogga dalka oo maanta loo dabaal dagaayo